နိုင်ငံ တစ် နိုင်ငံ ၏ Standard Army ဆိုသည် မှာ…. – Na Pann San
နိုင်ငံ တစ် နိုင်ငံ ၏ Standard Army ဆိုသည် မှာ….
Na Pann San W | August 2, 2020 | Local News | No Comments
စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး က အစ စစ်သား အဆုံး တူညီ( uniform) ဝတ်စုံတွေ ကို တန်းတူဝတ်ဆင်ကြရ ပါတယ်၊စ စ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက မင်းသားစတိုင်လ်ဝတ်စုံ ဝတ်ပြီး ငယ်သားကိုတော့ စုတ်စုတ်ပြတ်ထား တာ မျိုး မရှိ ပါဘူး၊ ရာထူး အဆင့် တံဆိပ်ကွာတာကလွဲ ရင် အားလုံး ဟာ တပြေးညီ တူညီ ဝတ်စုံကိုပဲဝ တ်ရ ပါတယ်၊
Standard Army ဆိုသည်မှာ
စစ်တပ်ပိုင်စီးပွားရေးတွေ လုပ်စရာ မလိုသလို ၊ နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ လွှတ်တော်လိုနေရာမှာ လည်း ကိုယ်စားလှယ် လုပ်ပြီးစွက်ဖက်ခြင်း မရှိပါဘူး၊
နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး အတွက်ကိုသာ ထမ်းဆောင်ပြီး ပြည်တွင်းသာမကပြည်ပနိုင်ငံများကပါ လေးစားရတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်ပါတယ်၊
သမ္မတ အမိန့်နာခံရသော ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ၏ကွပ်ကဲမှုအောက် တွင် စည်းကမ်းတကျရှိသောစစ်တပ်ဖြစ်ပါတယ်၊
ထိုစစ်တပ် အတွက် ပြည်သူပိုင်မြေများကို တရားသဖြင့်သော် လည်းကောင်း ၊မတရားဖြင့်သော်လည်းကောင်း ရယူခြင်းမျိုး မလုပ်ဘဲ ထားရာနေ၊စေရာသွားသည့် စစ်တပ်မျိုးဖြစ်တယ်
Standard Army ဆိုသည် မှာ
ပြည်ပကျူးကျော်မှုများ ကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည့် အတွက် ပြည်တွင်း လက်နက်ကိုင်များနဲ့ အချိန်ဖြုန်းနေရသည့် စစ်တပ်မျိုးမဟုတ်ပေ
သမ္မတ အာဏာနှင့် ကာဝန်ကွပ်ကဲမှုအောက် ၌ အမိန့်နာခံဆောင်ရွက်ရသော အဖွဲ့စည်းဖြ စ်၍ တာဝန်နှင့် ပတ်သက်လျှင် ပြည်သူ့ငြိုငြင်ခြင်းမှ ကင်းသောစစ်တပ်ဖြစ် ပေသည်
ကာကွယ်ရေး သီးသန့် အဖွဲ့စည်းဖြစ်သောကြောင့် လူမျိုးစုံ ၊ဘာသာစုံတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံ အတွက် လူမျိုး၊ဘာသာအစွဲ ကင်းစွာဖြင့် ရပ်တည်နေနိုင်သော သူများ ဖြစ်တယ်
ပြည်သူ့လစာစားသူများဖြစ်သည့် အတွက် ပြည်သူအပေါ်မှာ မေတ္တာ၊စေတနာ၊အနစ်နာ တို့ဖြင့်ပေးဆပ်မှုပြုနိုင်သော စစ်တပ် ဖြ စ်တယ်
စစ်တပ် ရှိ လို့ တိုင်းပြည်ရှိသည် ဟု သဘောမထားဘဲ ပြည်သူ ရှိ၍ စစ်တပ် ရှိသည်ဟူသော ခံယူချက်ဖြင့် တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေး ကို တာဝန်ယူထားသော စစ်တပ်မျိုးကို ခေါ် တယ်…..Martin Aung
စဈဗိုလျခြုပျကွီး က အစ စဈသား အဆုံး တူညီ( uniform) ဝတျစုံတှေ ကို တနျးတူဝတျဆငျကွရ ပါတယျ၊စ ဈဗိုလျခြုပျကွီးက မငျးသားစတိုငျလျဝတျစုံ ဝတျပွီး ငယျသားကိုတော့ စုတျစုတျပွတျထား တာ မြိုး မရှိ ပါဘူး၊ ရာထူး အဆငျ့ တံဆိပျကှာတာကလှဲ ရငျ အားလုံး ဟာ တပွေးညီ တူညီ ဝတျစုံကိုပဲဝ တျရ ပါတယျ၊
Standard Army ဆိုသညျမှာ
စဈတပျပိုငျစီးပှားရေးတှေ လုပျစရာ မလိုသလို ၊ နိုငျငံရေးလုပျတဲ့ လှတျတျောလိုနရောမှာ လညျး ကိုယျစားလှယျ လုပျပွီးစှကျဖကျခွငျး မရှိပါဘူး၊
နိုငျငံတျောကာကှယျရေး အတှကျကိုသာ ထမျးဆောငျပွီး ပွညျတှငျးသာမကပွညျပနိုငျငံမြားကပါ လေးစားရတဲ့စဈတပျဖွဈပါတယျ၊
သမ်မတ အမိနျ့နာခံရသော ကာကှယျရေး ဝနျကွီး ၏ကှပျကဲမှုအောကျ တှငျ စညျးကမျးတကရြှိသောစဈတပျဖွဈပါတယျ၊
ထိုစဈတပျ အတှကျ ပွညျသူပိုငျမွမြေားကို တရားသဖွငျ့သျော လညျးကောငျး ၊မတရားဖွငျ့သျောလညျးကောငျး ရယူခွငျးမြိုး မလုပျဘဲ ထားရာနေ၊စရောသှားသညျ့ စဈတပျမြိုးဖွဈတယျ
Standard Army ဆိုသညျ မှာ
ပွညျပကြူးကြျောမှုမြား ကို ကာကှယျရနျဖွဈသညျ့ အတှကျ ပွညျတှငျး လကျနကျကိုငျမြားနဲ့ အခြိနျဖွုနျးနရေသညျ့ စဈတပျမြိုးမဟုတျပေ
သမ်မတ အာဏာနှငျ့ ကာဝနျကှပျကဲမှုအောကျ ၌ အမိနျ့နာခံဆောငျရှကျရသော အဖှဲ့စညျးဖွ ဈ၍ တာဝနျနှငျ့ ပတျသကျလြှငျ ပွညျသူ့ငွိုငွငျခွငျးမှ ကငျးသောစဈတပျဖွဈ ပသေညျ
ကာကှယျရေး သီးသနျ့ အဖှဲ့စညျးဖွဈသောကွောငျ့ လူမြိုးစုံ ၊ဘာသာစုံတို့နထေိုငျသောနိုငျငံ အတှကျ လူမြိုး၊ဘာသာအစှဲ ကငျးစှာဖွငျ့ ရပျတညျနနေိုငျသော သူမြား ဖွဈတယျ
ပွညျသူ့လစာစားသူမြားဖွဈသညျ့ အတှကျ ပွညျသူအပျေါမှာ မတ်ေတာ၊စတေနာ၊အနဈနာ တို့ဖွငျ့ပေးဆပျမှုပွုနိုငျသော စဈတပျ ဖွ ဈတယျ
စဈတပျ ရှိ လို့ တိုငျးပွညျရှိသညျ ဟု သဘောမထားဘဲ ပွညျသူ ရှိ၍ စဈတပျ ရှိသညျဟူသော ခံယူခကျြဖွငျ့ တိုငျးပွညျကာကှယျရေး ကို တာဝနျယူထားသော စဈတပျမြိုးကို ချေါ တယျ…..Martin Aung
မီတာခ တက်တာဟာ ပြည်သူလူထုက အသုံးများသွားပြီး ထပ်တိုးသွားတဲ့ သုံးစွဲမှုက နှုန်းထားမြင့်တဲ့ အထဲ ကို ပါသွားတာကြောင့်လည်း မီတာခ များသွားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနပြော
အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား ဆဲဆိုပုတ်ခတ် ရေးသားသူအား တရားစွဲရန် တိုင်းအစိုးရထံ တင်ပြ
ပြည်သူအားလုံး ၀မ်းသာစရာပါ.. မြန်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ်ရောဂါကို အောင်မြင်စွာကုသပေးနိုင်ပါပြီ
ဒီနေ့ ဒီအခြိနျ ဒီခတျေကွီးမှာ ယောကျြားပိုငျးလုံးတှေ ပေါလာတယျဆိုတာကို သကျသပွေလိုကျတဲ့အဖွဈ ဖွဈစဉျမှာ